Uye hapana chisikwa chakavanzika pamberi pake, asi zvose zvakafukurwa uye mumaziso kwaari watinofanira rondedzero. Hebrews 4:13
I uzvitore, ipapo, kuti kusatenda muna Jesu (NOT muna Jesu) ndiko ufuratire Jesu vatsvake kugutsikana mune zvimwe zvinhu. And BELIEF in Jesus is coming to...
About mwedzi apfuura ndakanyora Blog kutaurira vabereki nei ndakaroorana muduku. I was deeply encouraged by the responses from all who read it and my prayer has been...
Pano vamwe vhidhiyo kubva mharidzo ndakaparidza kutanga kwegore rino muSan Diego. Musoro musangano akanga "nepaanogona”, saka ndakasarudza kuparidza pamusoro Romans 12:1-2. What does it look...
Ndinoda mazvita kuna vose vakanyengetera kwatiri apo takanga rwavakaita vari kondinendi guru Africa. Ishe nenyasha akapindura vazhinji minyengetero ivavo, and...
Right vodaro 12:34 ndiri Botswana. Ndicho redu rokutanga zvizere zuva Africa uye Ishe chava kutoshanda. The whole Reach crew landed in Johannesburg last night and flew to...